» डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका १० रोचक तथ्यहरु
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका १० रोचक तथ्यहरु
१२ पुष २०७७, आईतवार २१:०६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १२ पुस । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ को पहिलो सिजन सकिसकेको छ । पहिलो सिजनमै तहल्का मच्चाउन सफल यस शोमा ग्राण्ड प्रिमियरसहित जम्मा २७ वटा एपिसोडहरु प्रसारण भएका थिए । के तपाईलाई थाहा छ ? यो शोमा सबैभन्दा बढी बटम थ्रीमा परेको जोडी कुन हो ? यो शोमा सबैभन्दा बढी निर्णायक मत पाउने जोडी कुन हो ? सम्भवत यी प्रश्नहरुसहित तपाईलाई धेरै जसो प्रश्नहरुको जवाफ थाहा होला । तर यस भिडियोमा हामी डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल सिजन १ को त्यस्ता १० वटा रोचक तथ्यहरुका बारेमा बताउँदैछौँ जसमध्ये धेरैजसो तपाईलाई थाहा नहुनपनि सक्छ । के होलान् त ती रोचक तथ्यहरु ? आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ ।
तथ्य नम्बर १–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सबैभन्दा बढी बटम लाईनमा परेको जोडी बुद्ध लामा र केबिका खत्रीको बुद्धिका जोडी हो । बुद्धिका जोडीले शोको फाईनलसम्म आईपुग्दा ५ पटक बटम लाईनको सामना गरेका थिए ।
तथ्य नम्बर २–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा बटम लाईनमै नपरेपनि स्वईच्छिक रुपमा बाहिरिएको जोडी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ र कोरियोग्राफर सरोज मोक्तानको रकरोज जोडी हो । प्रस्तुतिका लागि तयारी गर्दै गर्दा रक्षा घाईते भएपछि उनीहरु शोबाट स्वईच्छिक रुपमा बाहिरिएका थिए ।
तथ्य नम्बर ३–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा पार्टनर परिवर्तन गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कलाकारहरु पुजा ठाकुर र दिभान्सी बैदवार हुन् । कलाकार पुजा ठाकुरको जोडी कोरियोग्राफर राजिव समर कार्य व्यस्तताले शोमा सहभागी हुन नसकेपछि पूजाले स्वईच्छिक रुपमा बाहिरिएका कोरियोग्राफर सरोज मोक्तानसँग एउटा एपिसोडमा संगै प्रस्तुति दिएका थिए तर उनीहरु शोही हप्ता शोबाट बाहिरिएका थिए । त्यस्तै दिभान्सी बैदवारको शो सुरु हुनुभन्दा केही हप्ता अघिसम्म शुभम भुजेलसँगको प्रोमो पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर शो सुरु भएपछि भने उनको पार्टनरका रुपमा सिद्धार्थ श्रेष्ठ र कोरियोग्राफरका रुपमा सञ्जय लामाले साथ दिएका थिए । कोरियोग्राफर सञ्जय लामाले पनि शो सुरु हुनु अघि नायिका एलिजा गौतमसँग जोडी बाँधेर प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको थियो तर पछि उनको पार्टनर परिवर्तन भएको हो ।
तथ्य नम्बर ४–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एकमात्र वाईल्ड कार्डका रुपमा कलाकार प्रियना आचार्य र कोरियोग्राफर शुभम भुजेल सहभागी भएका थिए । उत्कृष्ट ९ छनौट भईसकेको अवस्थामा उनीहरु पाँचौँ हप्तामा शोमा वाईल्ड कार्ड ईन्ट्री भएका थिए । उनीहरु शोमा सेकेण्ड रनर अप भएका थिए ।
तथ्य नम्बर ५–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा निर्णायकहरुबाट सबैभन्दा बढी अंक पाउने जोडी शोको बिजेता नायिका सुमी मोक्तान र कोरियोग्राफर बिजु पार्की हुन् । सुबिजु जोडीले फाईनलसम्म पुग्दा निर्णायकहरुबाट जम्मा ४४६ अंक प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै सबैभन्दा कम अंक पाउने जोडी सरोज र रक्षा हुन् । उनीहरुले दुई हप्तामा जम्मा ४९ अंक प्राप्त गरेर शोबाट स्वईच्छिक रुपमा बाहिरिएका थिए ।
तथ्य नम्बर ६–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा शोभरि नै एउटै अंक धेरै पटक पाउने जोडी बुद्धिका जोडी हो । बुद्ध र केबिकाले निर्णायकहरुबाट सबैभन्दा बढी २६ अंक ७ पटक पाएका थिए । उनीहरु शोमा फर्स्ट रनर अप भएका थिए ।
तथ्य नम्बर ७–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा धेरै पटक पूर्णाङ्क ३० पाउने जोडी सुबिजु जोडी हो । सुमी र बिजुले शोभरिमा निर्णायकहरुबाट ६ पटक ३० मा ३० नै अंक पाएका थिए ।
तथ्य नम्बर ८–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा एकल रुपमा सबैभन्दा बढी अर्थात ३ वटा अवार्ड जित्ने एकमात्र जोडी हुन् दिभान्सी बैदवार र सिद्धार्थ श्रेष्ठको जोडी । उत्कृष्ट ६ सम्म पुगेका उनीहरुले तेस्रो अवार्ड पाएकै हप्ता शोबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।
तथ्य नम्बर ९–डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक प्रतियोगितात्मक डान्स गर्ने जोडी नेपाली फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का र कोरियोग्राफर युमी बलामीको हामी जोडी हुन् । उनीहरुले शोको पहिलो एपिसोडको पहिलो प्रस्तुति दिएका थिए जुन निक्कै भाईरल भएको थियो ।
तथ्य नम्बर १०– डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको युट्युबमार्फत सबैभन्दा बढी हेरिएको एपिसोड शोको पहिलो एपिसोड हो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यो एपिसोडलाई १९ लाख ८६ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । त्यस्तै एकल प्रस्तुतिहरुको क्लिपहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हेरिएको पफोर्मेन्स क्लिप फुलन्देकी आमाका रुपमा परिचित कलाकार उमेश राई र कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीको पहिलो नृत्यको क्लिप हो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस क्लिपलाई ६ लाख ९४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ ।